शौचालयको कथा – शौचालयको विकास कसरी र कहिले भयो? – फरक दृष्टि
By farak dristhi	 Last updated May 25, 2021
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न विषय अध्यापन गराउने केन्द्रीय विभागका शौचालयहरुमा अश्लील साहित्यको भण्डार पाइन्छ । मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको पहलमा त्रिविको घडीघरमा रहेको शौचालय सफा गर्ने क्रममा प्राज्ञिक संस्थाको शौचालय भन्नै लाजलाग्ने वस्तु भेटिएको थियो । साथमा शौचालयको भित्तामा अश्लील कुराहरु पर्याप्त लेखिएका थिए ।
शौचालय सिन्धु सभ्यतामै थियो कि पछि बन्यो?
प्रक्षालन पानी आपूर्ति प्रणाली (फ्लसिङ वाटर सप्लाई सिस्टम(को विकास सिन्धुघाँटीमा नै भएको भन्ने अनुमान गरिए पनि यसको प्रामाणिक इतिहास भने सन् ३१५ तिर रोमबाट सुरु भएको पाइएको छ । त्यतिबेला रोममा १४४ वटा शौचालय रहेको थियो भन्ने विश्वास ब्रिटिस एसोसिएसन अफ युरिन सर्जनले गरेको छ ।
यी दुई अवस्थाको बीचमा कसरी विकास भयो त ट्वाइलेटको इतिहास?
सन् १८६० मा थोमस क्र्यापरले पहिलोपल्ट फल्स ट्वाइलेटको डिजाइन गरे भन्ने कुरा युरोपको इतिहासमा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै, एलिजावेथका नाति ह्यारिङटले आफ्नो कार्यकालमा फल्स ट्वाइलेटको विकास गरेका थिए । उनले विकास गरेको नयाँ प्रविधिमा शौचालयको मुनिबाट एउटा पाइप जोडेर अन्तै निकास गर्ने चलन थियो ।